सिपी अर्याल - कान्तिपुर समाचार
ए केटा रिजेल्ट आयो अरे उठ् ।’ बुवा बिहान अचानक आएर ओढिराखेको बर्को याँकिदिनुभयो ।निद्राले मस्तराम थिएँ । जिन्दगीको सबभन्दा आनन्ददायी क्षणमा, एलएलसीपछिको समय । घरकाले पढ् कि पढ् भन्न पनि पाउँदैनथे । म फुक्काफाल । क्या आनन्द !र, आयो रिजल्ट !
मे तेस्रो साता बलिउड अभिनेता तथा भाजपा नेता परेश रावलले एउटा ट्वीट गरे, ‘आर्मीको जिपमा आन्दोलनकारीलाई बाँध्नुको साटो अरुन्धतीलाई बाँधे हुन्छ ।’
जीवन रहरहरूको संग्रहालय हो । रहरहरूको र्‍याक कुनै बेला अचानक भरिन्छ ।
जागिर खान भर्खरै थालेको थिएँ । कीर्तिपुरबाट पुग्नुपथ्र्यो कालोपुल । बिहान ९ बजेतिर पाँगा दोबाटो बसपार्क गएर गाडी कुर्थें । भीडभाड हुन्थ्यो । लाग्थ्यो मानिसहरू बस चढ्ने मौका पर्खिरहेका छैनन्, घमासान युद्ध लडिरहेका छन् ।
६८ वर्षपछि बेस्टसेलर !
इतिहासले कहिलेकाहीँ नराम्ररी झटारो हान्छ । त्यो प्रहारले कसैलाई दुख्न त दुखिहाल्दैन तर त्यसको अर्थचाहिँ गज्जबकै हुन्छ । कुनै विशेष याममा त्यस्ता अमूर्त प्रहारले बेलाबेला तरंग ल्याइरहन्छन् । नभए, लेखेको ६८ वर्षपछि जर्ज अरवेलको उपन्यास ‘नाइन्टिन एट्टी फोर’ प्रतिष्ठित अम्याजनडटकमको २०१७ को बेस्टसेलर लिस्टको नम्बर वानमा किन झुल्कन्थ्यो र ? वासिङ्टनपोस्टले किन लेख्थ्यो होला र, ‘ट्रम्पको शासन सुरुआतसँगै अरवेलको नाइन्टिन एट्टी फोरको बिक्री ९ हजार ५ सय प्रतिशतले बढ्यो ।’
सिपी अर्यालका लेखहरु :